Volamena 73.7kg : Zanaka pilote ihany no pilote nitondra ilay fiaramanidina
vendredi, 08 janvier 2021 07:56
Hatreto ilay mpanamory ilay fiaramanidina nitondra antsokosoko ilay volamena milanja 73.7kg dia mbola miriaria tsy misy resaka, nefa izy no tompon'andraikitra voalohany amin'ny mpandeha sy ny entana entiny.
Fantany tsara ny fisian'io entana mavesatra io.
Rehefa mandeha fiaramanidina madinika toa io dia lanjaina ny mpandeha sy ny entany.
Atrehan'ny Compagnie izany io fandanjana entana io. Eo dia efa tokony hitan'ny mpandanja entana fa misy entana mavesatra.
Tsy afa-miala ihany koa ny ACM, Douane, PAF, ny compagnie STA tompon'ny fiaramanidina.
Raha ny itineraire na lalan'io fiaramanidina 5R-ASB io dia tsy nandeha tany Toliara io fiaramanidina io, mbola mila fanadihadiana hafa izany no nahatany Toliara azy nefa ny balise n'ny avion tsy milaza ny fandehanany tany. Ny fiaramanidina tsirairay dia manana toy ireny GPS ireny milaza ny toerana misy azy na aiza izy na aiza, ahafantarana ny lalany, ny haavony, ny afangainam-pandehany, eny raha sanatria mianjera izy dia hita faritra taiza izy no nianjera.
Raha ny nolazaina dia niala tao Ivato Antananarivo (TNR) izy hanao sidina anatiny na vol local ny alakamisy 31 desembra 2020 tamin'ny 17h, ary tonga tao Toliara (TLE) ny 18h20 hanampy solika, vao nivadika vol International, ary niainga tao Toliara (TLE) hiazo an'i Aéroport international OR Tambo Johanhesburg (JNB) Afrika atsimo.
Mila amarinina izany raha tonga tao Toliara (TLE) marina izany ity fiaramanidina 5R-ASB io andron'ny 31 desembra 2021 io, ary nahoana ny GPS n'ilay fiaramanidina no tsy nanambara ny fandalovany tao Toliara izay. Ny ampitson'io 1 janoary 2021 anefa izy efa tany Toamasina, tsy voasambotra ny Mpanamory ary tsy nogiazana tany Afrika atsimo ny fiaramanidina. Azo antoka fa nampidina mpandeha sy ny entany izy, ary mbola tsy maintsy manao solika vao afaka andeha hiverina, ka ampy tsara ny fotoana nahitan'ny Douane Afrika atsimo ireto volamena sy ny fotoana tsy maintsy mbola nanaovan'ny fiaramanidina solika.
Azo eritreretina en transit izy ireo, ka tsy mandalo douane intsony, fa miandry ny fiaramanidina hitondra azy ireo indray ho any Dubai, toerana amarotana ireto volamena ireto.
Nefa hatramin'ny nisian'ny tranga tamin'ny 11 septembre tany Amerika ireny, dia averina savaina mandalo scan avokoa ny entana na bagage à main aza en transit, izany hoe alohan'ny hiondranana amin'ny fiaramanidina manaraka.
Fantatra ihany koa anefa fa ity karazana fiaramanidina ity, dia tsy ahavita indray mitoraka an'i Afrika atsimo raha hiala eto Antananarivo.
Toliara anefa tsy aéroport International, ary mihidy ny sisitany noho ny fepetra ara-pahasalamana. Misy NOTAM tsara, ary fantatry ny pilote izany, fantatry ny ACM izay manome alalana hisidina, fantatry ny PAF, Police de la frontière hanisy fitomboka ny passeport, taiza ary ny passeport no notombohana nefa Toliara tokony tsy misy PAF manomboka passeport.
Ny entana en transit local raha hivadika International ny fiaramanidina dia tsy maintsy ampidinina avokoa, na bagage à main aza savaina, fantatry ny pilote izany.
Amin'ireny fiaramanidina kely ireny tsy misy soute à bagage fa ny entana rehetra dia atao ao aoriana, misy filet izay fotsony manasaraka azy amin'ny mpandeha. Tsy misy fiavahany izany na bagage tsotra na bagage à main.
Tsy afa miala ny pilote, ACM, PAF, Douane, Compagnie STA, Ireo mpanondrana volamena antsokosoko, ary ireo tompon'ny entana, fa mpitondra entana na passeur na "mule" daholo ireo tratra ireo.
Ilay karana efa nigadra in 4 sa 5, ireny ilay karana efa professionnel higadra fotsiny no anakaramana azy.
Misy karana maromaro efa izany no asany, alain'ireo karana mafia ireo ireny hanao mission, dia gadraina, mikarama izy amin'izany, fa avy eo mandoa écolage dia miriaria indray, na afaka, porofon'izany efa fantatra fa nigadra in'efatra ary mpanao trafika volamena fa mbola miriaria manana passeport miditra sy mivoaka mitondra volamena 73,7kg, tsy misy IST na fanakanana ny tsy hivoaka ny sisi-tany.
Omeo ny anaranan'ireo tompon'entana sy ireo mpiray nitsikombakomba rehetra. Tsy maintsy nanana taratasy hitondrana ireo volamena ireo ny passeur, na ho sandoka aza, aiza ny ministeran'ny vola, izay milaza fa ny volana aogositra no faran'ny namelana ny anondranana volamena, nefa ny ministeran'ny harena an-kibon'ny tany milaza indray amin'ny fanambaràna nataony fa volana oktobra 2020 no farany.
Ireo fanambaràna 2 ireo, na ny ministeran'ny vola, izay tompon'antoka amin'ny volamena eto amintsika, satria izy no mitantana ny Banky Foibe, na ny ministeran'ny harena ankibon'ny tany dia milaza avokoa fa 73.5kg ilay volamena, nefa ny tatitry ny filan-kevitry ny minisitra milaza fa 73.7kg ilay volamena.